အခွင့်သာခိုက်မှာ ဂွင်မရိုက်စေချင်ပါ.. (ပေးစာ) ~ ဒီမိုဝေယံ
နေပြည်တော်မှ ဟိုတယ်တခု မြင်ကွင်း..
၁၄-၅-၂၀၁၂ ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြောကြားခဲ့ သော မိန့်ခွန်းတွင် ဟိုတယ်နှင်ခရီးသွား ကဏ္ဍ တိုးတက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး လိုအပ်ချက်များ လမ်းညွှန်ခဲ့ပါကြောင်း သတင်းစာတွင် ဖတ်ရှုရပါသည်။ မှန်ပါသည်။ ဟိုတယ်နှင်ခရီးသွား ကဏ္ဍတိုးတက်ရန် ၀န်ဆောင်မှု ကောင်းသော ခရီးသွားလုပ်ငန်း များလိုအပ်သကဲ့သို့ ၀န်ဆောင်မှုကောင်းသော Reasonable Price ဟိုတယ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ဟိုတယ်အများစုသည်..
အခန်းခဈေးနှုံးများကို သတ်မှတ်ချက် မထားဘဲ လိုသလို ဈေးခေါ်နေကြသည်။ သူတို၏ ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ချက် တွင် Rack Rate, Corporate Rate, NGO/ Embassies Rate စသည်ဖြင့် အခန်းတစ်ခန်း၏ အခန်းဈေးနှုန်းများကို အမျိုးမျိုး သတ်မှတ် ထားရှိပါသည်။ ဥပမာ Strand Hotel တွင်US$ ၁၂၀ တန် superior အခန်းတခန်းကို Rack Rate နှင့်ရောင်းပါက US$ ၅၅၀++ အဆိုပါအခန်းကိုပင် Corporate Rate, နှင့်ရောင်းပါက US$ ၁၅၀ NGO/ Embassies Rate နှင့်ရောင်းပါက US$ ၁၄၀ နှင့် ရောင်းပါသဖြင့် reservation မလုပ်ဘဲ ရောက်ရှိလာသော နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်အတွက် Rack Rate US$ ၅၅၀++ပေး တည်းခို ရပေတော့မည်။
နေပြည်တော် ကျောက်မျက်ပြပွဲ မြင်ကွင်းတခု..
FIT ဧည့်သည်တွေအတွက် တည်းခိုနေထိုင်ရေး မလွယ်ကူတဲ့ပြသနာပါ။ အခြား ဟိုတယ် များလည်းအလားတူပါဘဲ။ နေပြည်တော် ဟိုတယ်တွေမှာ ကျောက်မျက်ပွဲတော် ကျင်းပတဲ့ အချိန်က ကျပ် ၃၅၀၀၀တန် အခန်းကို ကျပ်၇၀၀၀၀-၈၀၀၀၀ ဈးနဲ့ ငှားရမ်းကြတယ်။ Hospitality Industry လို့ ကြွေးကြော်နေကြတဲ့ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ Hospitality ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုရော နားလည်ကြပါရဲ့လား။ ဟိုတယ်များပိုင်ရှင် ဟိုတယ်/ခရီးဝန်ကြီးရဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ ၀င်ထွက်သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေးဆိုသော စီမံချက်နှင့်အတူ Warmly Welcome And Take Care of Tourist ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေ ရန်ကုန်မြို့လူစည်ကားရာ အရပ်တွေမှာ စိုက်ထူလို့ထားပါပြီ။ လက်တွေ့မှာ နိုင်ငံခြားသားတွေ တည်းခိုရန် ဟိုတယ်များက Reasonable Price ဟိုတယ်များဖြစ်ပါရဲ့လား။
ဟိုတယ် များ Star သတ်မှတ်ရေး တခုတည်း အာရုံစိုက် မနေဘဲ မိမိ နိုင်ငံလာရောက်သည့် ဧည့်သည်များ အဆင်ပြေစွာ တည်းခို နေထိုင်နိုင်ရေး သည်သာအဓိက ဖြစ်ပါကြောင်း။ နိုင်ငံခြားသားတွေတော့ အများအပြားလာကြပြီ ငါတို့ဂွင်ထဲရောက်တုန်း အပီ ရိုက်လိုက်မယ်လို့ တစ်နပ်စားဥာဏ်နဲ့ လုပ်နေကြရင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်မှုကို နှောက်ယှက် ဟန့်တားသူများဟာ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဟိုတယ်များပိုင်ရှင် ဟိုတယ်/ခရီးဝန်ကြီး သိရှိနိုင်ပါရန် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ Hospitality Industryရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း။
ဓာတ်ပုံများ. ဒီမိုဝေယံ၊ ဒီမိုကောင်းကင်